Humna haaromsamuu danda'u - BBC News Afaan Oromoo
Humna haaromsamuu danda'u
...tti maxxanfame 14:53 30 Bitooteessa 202114:53 30 Bitooteessa 2021
'Bishaan Masriin argattu hir'annaan 'naannichatti waan hamaatu dhufa' - Abdel Fattaah al Siisii
Pirezedaantiin Masirii Abdel Fattaah al Siisii sababa Hidha Haaromsaa Laga Abbayaa Itoophiyaan ijaaraa jirtuun bishaan biyya isaaniif dhiyaatu hir'annaan 'naannicha keessatti waan hamaatu ta'a' jechuun akeekkachiisan.
...tti maxxanfame 6:13 31 Onkololeessa 20206:13 31 Onkololeessa 2020
Itoophiyaan dubbii Tiraamp mormuun duula gaggessuufi
Pirezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp dubbii Marsiin hidha Abbayyaa 'dhoosuu dandeessi' jechuun isa dubbatan mormuum Itoophiyaan guyyaa har'aa mallattoo walitti qabuu jalqabuufi.
...tti maxxanfame 9:30 24 Onkololeessa 20209:30 24 Onkololeessa 2020
Itoophiyaan dubbii Tiraamp irratti ambaasaaddara US gaaffiif waamte
Pirezidantiin Ameerikaa waa'ee hidha Haromsaa irratti dubbii falmisiisaa dubbataniin booda namoonni yaada garaa garaa kennaa jiru.
...tti maxxanfame 7:54 24 Onkololeessa 20207:54 24 Onkololeessa 2020
Dorsiifniiwwan dhimma Hidhaa Haaromsa Guddicha Itoophiyaa Laga Abbayaa waliin walqabsisuun taasifamaan hubannoo dhabuurraa kan ka'aniifi seera idil-addunyaa kan cabseedha jedha Waajirri Ministeera Muummee Itoophiyaa.
...tti maxxanfame 5:58 24 Onkololeessa 20205:58 24 Onkololeessa 2020
Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Masriin Hidhaa Haaromsa Guddicha Itoophiyaa ni rukkutti jechuun dubbatan.
...tti maxxanfame 6:19 15 Onkololeessa 20206:19 15 Onkololeessa 2020
Baqattoonni Itoophiyaa Masrii jiran waa'ee Hidha Guddichaa maal jedhu?
Video caption: Lammileen Itoophiyaa Masrii jiran waa'ee Hidhaa Guddichaa maal jedhu?Lammileen Itoophiyaa Masrii jiran waa'ee Hidhaa Guddichaa maal jedhu?
...tti maxxanfame 10:09 8 Onkololeessa 202010:09 8 Onkololeessa 2020
Masriifi Keeniyaan dhimma Hidha Haaromsaa Itoophiyaarratti waliin dubbatan
Pirezidaantiin Masrii Abdulfattaa al-Siisii gitasaanii kan Keenyaa waliin waa'ee hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaarratti mari'atan.
...tti maxxanfame 12:54 4 Adooleessa 202012:54 4 Adooleessa 2020
Mariin hidha Haaromsa Guddichaa adda citee ture deebi'e eegale
Itoophiyaa, Sudaan fi Masrii giduu mariin dhimaa hidha Haaromsa Guddichaa taasifamaa tureefi adda citee ture deebii'ee guyyaa Jimaata kaleessaa eegaluun dhagahame.
...tti maxxanfame 11:20 23 Waxabajjii 202011:20 23 Waxabajjii 2020
Itoophiyaan xalayaa dhimma Abbayyaarratti UN'tti barreessiteen maal jette?
Mariin Hidha Guddicha Abbayyaa biyyoota sadan jidduutti gaggeeffamaa ture osoo hinxumuramiin Masriin Mana Maree Nageenyaa UN’tti xalayaa barreessite. Kaayyoon xalayichaas dhaabbatichi akka marii biyyootaa jidduugalu gaaffachuufi. Itoophiyaanis adeemsa Masrii kana komachuun dhaabbatichaaf kaleessa xalayaa barreessite.
...tti maxxanfame 9:21 9 Waxabajjii 20209:21 9 Waxabajjii 2020
'Osoo qabeenya bishaanii qabnuu kadhachuun nu nuffisiiseera'-MM Abiy
Mormiin gama Masiriifi Sudaaniin dhiyaataa jiru jiraatellee Itoophiyaan ijaarsa Hidha Haaromsa Itoophiyaa xumuruuf jirti jedhan Ministirri Muummee Abiy Ahmad.